अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:२० 1,020 0
बिश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाईरसको प्रभाबले अबको विश्व अर्थतन्त्र नै धारासायी बन्ने अबस्थामा छ । यसले बिश्वलाइनै चलायमान बन्न दिएको छैन । नत मान्छै कतै आबत जाबत गर्ने पाएका छन् । अब बिश्वको अर्थतन्त्र कता जाला न्न सकिने कुनै आकलन गर्न सकिने अबस्था त छैन। दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको बेरोजगारी अबको दिनमा झन जटिलतातर्फ जाने संकेत देखिदै गएको छ।
२०७२ सालमा आएको महाभुकम्पले नेपाको मोबाईल क्षेत्रलाई ठूलो चोट पुराएको थियो । त्यस महामारीले दिएको चोटमा खाटो बस्न नपाउदै छिमेकि राष्टले गरेको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा थला पर्यो यो अबस्थामा पनि मोबाईल बजार लाई ठुलै चोट परेको थियो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यो बजार फेरि अर्कोपटक नराम्रो अवस्था मा पुगेको छ ।
मोबाईल ` बजार´ अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा निर्भर रहने भएकालेे नेपालको मोबाईल बजार पनि त्यतिकै दयनीय परिस्थितिमा रहेको पाईन्छ । नेपलको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने एक मात्र माध्यमा रेमिटेन्स बनेको हो र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रेमिटेन्सले ठूलो हिस्सा लिदै आएको छ। दक्षिण एसियाभित्र नेपालमा रेमिटेन्सको सबै भन्दा धेरै हिस्सा रहेको दखिन्छ त्यो अेैले हत्त्तै घट्ने दखिन्छ। येस्को साथ साथै real state को पनि कुनै काम नहुदा यो बजार लाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको आन्कलन गर्न सकिन्छ ।
बजार को आसा
चालू आर्थिक वर्ष को तथ्याङक हेर्दा नेपाली बजारमा विश्वका विभिन्न देशबाट मोबाइल भित्रिने गरेपनि ती मध्ये चीन, भीयतनाम, भारत लगायतका देशबाट बढी फोन आउने आंकलन छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले आपूर्तिमा समस्या होला भन्ने उद्देश्यले व्यवसायीले पहिल्यै मोबाइल बडी नै आयात गरेको पनि पाईन्छ ।
‘मोबाइल ल्याउने मुलुकमा बन्दाबन्दी होला भनेर व्यवसायीले मोबाइल स्टक राख्न पहिल्यै आयात गरे पनि , अहिले बेच्न नपाउँदा घाटा लागेको गुनशो पनि यधा कदा सुन्न पाईन्छ ।
देश सामान्य अवस्थामा आएको लामो समयपछि मात्र मोबाइलले बजार लिने पका पकि नै छ । यो अबस्थ मा व्पापारी ले बैंकको लोन सम्म कसरी तिर्ने भन्न थालेको छन् । बिगत को बर्ष लाई आधार मन्नि हो भने यो समयलाई मोबाईल Business को मेरुदण्ड को रुप मा लिइन्थो किनभने यो समय चार लाख भन्दा बडि बिद्यार्थी ले SEE अनि नौ लाख भन्दा बडी ले उच्च मद्यमिम परिछ्य दिएर बस्थे यो आबस्थ मा मोबाईल बजार मा सकरत्मक प्रभाव देख्न पैन्थो।
हामी बच्चा पना को स्मरन गरौं न 🤔🤔
कुनै बेला थियो कति मोबाइल चलाएको ! बन्द गरेर पढ्न भनेर आमाले हप्काएपछि लुसुक्क पर्दै मोबाइल बन्द गरी पढ्न जन्थे अनि किताब अगाडि राखेर सोच्थी ! भविष्यमा मोबाइलमै पढ्ने दिन आए कति मज्जा आउँथ्यो होला है ? दिनभरि मोबाइलमा गेम खेलेर बस्थेँ । अनि पढ्दैछु, डिस्टर्ब नगर्नुस् भन्दै घरमा झुठो बोल्न कति माजा हुन्थ्यो होला है? हो आज तेस्तै समय आएको छ। बिबिन्न बिद्यालय हरु ले अन्लाईन क्लास लिन थलेका छन् । विभिन्न संघ-संगठन हरु ले पनि प्राविधि बाट नै कर्यकरम संचालन गर्दै आयेको छन् यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि आजको युग को अपरिहार्य साधन मोबाईलनै हो भनेर ।
साच्चै समय आएकै हो त ?
लकडाउनमा घर बाहिर निस्कन नमिलेपछि अधिकांश समय इन्टरनेट, मोबाइल, ल्यापटप अनि टिभीमा समय बितौनै पर्नी बाध्यता यस्को साथै आफ्नो एकाडेमीक अध्ययन पनि अनलाइन मार्फत नै गर्ने को जमात पनि राम्रैनै भएको पाईन्छ ।
पछिल्लो समय मोबाइलले विश्वमै राम्रो बजार पाइरहेको थियो। पछिल्लो समय मोबाइल प्रयोगकर्ता पनि बढ्दै गएका थिए । ग्रामीण क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सेवा पुग्न थाले पछि विकट क्षेत्रमा पनि मोबाइल सेवाको प्रयोग तीव्ररूपमा भइरहेको थियो येस्ले मोबाइल बजार लाई नै ठुलै राहत मिलिरयेको थियो ।
यसैलाई मूल्याकंन गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमको मोडालिटीलाई पुनर्विचार गरी रोजगार गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्नेगरी बजेट र अन्य आर्थिक नीति तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ योजना निर्माण गर्नु र निर्माण भएका असल योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने । त्यसैगरी विगतमा लिइएका नीतिलाई परिमार्जन गरी भविष्यको सुस्पष्ट खाका तयार गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
हो बिश्वास गरुँ अब को बाटो
यस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवा फर्कने र अबको दिन मा आबैधानिक रुप मा आउने मोबाईल पनि केहि कमि हुने देखिन्छ ती युवा हरु लाई क्रय शक्ति बढाउने खालको चलायमान बनाउन सके यस क्षेत्र राम्रै फड्को मर्नी आंन्कलन छ ।
विश्वभरीनै कोरोनाले आतङ्क मच्चाइरहेको अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि अप्रिय घटना नहुनाले पर्यटकहरुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल सुरक्षित स्थान रहेको प्रमाणित गरेको छ । हामीले विश्वमाँझनै नेपाल सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य रहेको प्रचार गर्न सक्छौ । जसले रेमिट्यान्सको विकल्पमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेको अवस्थामा रोजगारी श्रिजना गर्ने छ र येस्ले पनि मोबाईल बजार लाई पुन बिउताउन मद्धत गर्नेछ ।
चितवन बजार प्रतिनिधि
शिक्षकले मासिक तलव नपाए कानुनी बाटाे खुला रहने
पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् , २०७७ जेठ ०३ गते को राशिफल